Kan Saba Ball’aa Oromoo utuu hin dhaga’aamiin Kan Saba Xiqqaa addunyaa biratti dhaga’amee……Maaliif? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKan Saba Ball’aa Oromoo utuu hin dhaga’aamiin Kan Saba Xiqqaa addunyaa biratti dhaga’amee……Maaliif?
Kan Saba Ball’aa Oromoo utuu hin dhaga’aamiin Kan Saba Xiqqaa Tigireetu addunyaa biratti dhaga’amee……Maaliif?
#Sabni Oromoo addunyaa irratti kan akka isaa sagalee qabuu fi dhaga’aamuuf hin jiru ture. Dhimma Sagaleen Ummata bal’aa kanaa addunyaa buratti dhaga’aamuu dide jedhuuf badiin ilma Oromoo bira jira. Numatu wal-sakaale, numatu daandii walitti cufe, numatu walgaadi’e.
#Gaafa mootummaan Abiyyi Ahmad dhufu Oromootni babbeekamoon biyya alaa kana jiran Mootummoota biyya alaa jiran faana dipilomaasii uumanii akkas jedhanii Abiyyiif kadhachaa turan “Wayyaneen kan Toophiyaa diigaa turte amma kuftee jirti. Qabeenyaa gurguddaa biyyattiin qabdu saamanii gara biyyaa galchanii jiru. Mootummaan Abiyyi amma dhufee jiru Mootummaa Oromooti. Deggeramuu qaba, biyyattii ijaaraa jira, yeroon bira dhaabbachuu qabnu amma jedhanii guddaatii hanga xiqqaatti Abiyyiif Dipilomaasii Uumanii kadhachaafii turan. Addunyaan Maallaqan dinagdee biyyattii guddisuuf bira dhaabbate.
#Abiyyi Ahmad Maallaqa addunyaa irraa karaa dipilomaasiin aragte hundumaa gara Lixaa fi Kibba Oromiyaatti Waraana isaa bobbaasee Oromoo dhangalaasuu jalqabe. Gaafa Lolli kun ummata Oromoo kanarratti labsamees jarri Dipilomaasii Uumanii Mootummaa Toophiyaa dinagdeen guddisna jedhan callisanii ilaalan. Abbiyyiin Ummata Oromoo ajjeesee fixuu dadhabe, Ummatiis utuma du’uu qabsoo isaa itichee itti fufe.
Dubbiin Jabaachaa gaafa deemu Oromiyaan Bahaa #Arsii, #Harargee fi #Baaleen uuuuuuuu Ummanni keenya Lixaa fi Kibbaa nu jalaa dhumaa jiru jedhee Asfaaltitti ba’ee Fincila dhoose. Waan Soba hin qabne Magaalaa #Shaashamanneetti utuu walirraa hin citiin guyyaa 6f hiriirri mormii Oromiyaa Lixaa fi kibbaa irraa ajjechaan ha dhaabbatu, Neetiworkiin haa lakkifamu jedhanii walitti fifinsaan mormii dhageessisan. Mormiin ummati cabsee gaggeesse kun hoggantootatti rifannaa uume. Warri Abiyyi jala fiiganii dippilomaasii uumaniis naasuu irraa kan ka’e callisuu filatan. Dubbiin bubbult
Barreessaan Milki Darara
Jeerrii kun waarra ummaattaa oromo
Ttiifi dinaa dhugaa ta.aanii dhaa
“ላሊበላ የአገዎች ስልጣኔ ነው ፣ ሰሎሞናዊ ስርአት ፀረ ስልጣኔና የግብፅ አሽከር ነበር”
Ya baate yaa baate
jarreen walitti yaate
OMN: Haala yeroo irratti Professor Abbas Ganamoo waliin
Oduu Amajjii 31, 2021
ዶ/ር ደብረፅዮን ተናገሩ፣ ለማ መገርሳ ወጡ፣ የአብን ጊዜው አሁን ነውና ምክንያቱ፣ ኮንዶሚኒየም ሊታደል?፣ ጄነራሉ ስለመተከል፣ ልደቱ ስለትግራይ| EF